काठमाडौंमा र पोखरामा फोर-जी प्रयोगकर्ता ४ लाख नाघे, अब कहाँ हुँदैछ विस्तार ? – Setosurya
मङ्गलबार १०, फागुन २०७३
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले थालेको फोर-जी चलाउने प्रिपेड ग्राहकको संख्या ३ लाख ३५ हजार नाघेको छ । काठमाडौं र पोखराका प्रिपेड मोबाइलमा फोरजी सुरुवात भएको २० दिनमै यसको ग्राहक संख्या ३ लाख ३५ हजार नाघेको हो ।
नेपाल टेलिकमका सह-प्रवक्ता सोधन अधिकारीले प्रिपेड ग्राहकको फोर-जी प्रतिको मोह उत्साहजनक रहेको बताए ।
पोष्टपेडमा फोर-जी चलाउने ग्राहकको संख्या पनि ६५ हजार नाघेको छ । प्रिपेड र पोष्टपडे गरेर फोर-जीका लागि कुल ४ लाख ग्राहक दर्ता भइसकेका छन् ।
पुस १७ गतेदेखि टेलिकमले काठमाडौं र पोखराका पोष्टपेड ग्राहकका लागि फोर-जी सेवा सुरुवात गरेको थियो भने प्रिपेडमा माघ २२ बाट । ‘फोर-जी ब्यवसायिक हिसावमा सफल हुने बाटोमा लम्किसक्यो । ग्राहकको आकर्षण र चासो यसप्रति निकै देखिएको छ’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने ।
अब १५ मुख्य नगर क्षेत्रमा
तेस्रो चरणमा फोर-जी सेवा १५ वटा मुख्य नगर क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ । बिर्तामोड, धरान, इटहरी, भरतपुर, हेटौंडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवल, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा अब फोर-जी विस्तार हुनेछ ।
टेलिकमले १५ वटा उपहमागरपालिकाको फोर-जी सेवाका लागि अखहिले नेटवर्क डिजाइन गरिरहेको छ । यो सकिनासाथ टेण्डर गरेर फोर-जीलाई प्रमुख शहरी क्षेत्रहरुमा केन्द्रित गरिनेछ ।
‘एक वर्षभित्रै देशैभर’
टेलिकमले एक वर्षभित्रै आफ्नो पहुँच पुगेका सबै क्षत्रेमा फोर-जी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । संसदको विकास समितिले पनि एक वर्षभित्र देशभर फोर-जी सेवा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो ।
टेलिकमले वाषिर्कउत्सवका अवसरमा ल्याएका विभिन्न प्याकेज योजना पनि फोर-जी प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेको छ । मोबाइलमा फाष्ट इन्टरनेट चलाउन चाहानेका लागि फोर-जी एकमात्र विकल्प बनेको छ ।
टेकिलमले फोर-जीलाई गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न प्राविधिक तयारीहरु पनि गरिरहेको बताएको छ । पछिल्लोपटक आइफोनका सबै सिरिजमा फोर-जी चलाउन सकिने भएपछि पनि यसका ग्राहक बढेको टेलिकमले जनाएको छ ।
सरकारले सहमति पालना नगरेको अस्थायी शिक्षकको गुनासो
१५ वर्षदेखि हराएको छोरा फेसबुकमा भेटिएपछि…
पितासँग अनुहार नमिलेपछि आमाको उपचारमा संलग्न डाक्टरले गर्भधारण गरिदिएको युवतीको आरोप
पर्वतमा पहिलो व्यावसायिक एफएम सञ्चालनमा
शिक्षक नारायण पौडेलको रहस्यमय मृत्युको विषयमा पर्वतका शिक्षक संगठनले मुख खोले ! यस्तो छ विज्ञप्ती
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतमा एमालेको प्यानल नै बिजयी, प्रमुखमा विश्वकर्मा
एमालेले यसरी बजायो मधेसमा ब्याण्ड बाजा
रोमाञ्चक खेलमा नेपाल श्रीलंकासँग १ रनले पराजित
फेरी पनि निर्वाचन सार्ने दाउमा काँग्रेस, राजपालाई फकाएर मिति सार्ने रणनीति